साहित्यमा कोरलिएका हल्लाका चल्ला !- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
साहित्यमा कोरलिएका हल्लाका चल्ला !
राजनीतिक दलका नेताहरु जसरी प्रायोजित प्रचारबाजीमा रमाउँछन्, लेखक–साहित्यकार पनि त्यही समाजका उपज हुन्, उनीहरुले फर्जी प्रशंसा नरूचाउने कुरै भएन । पालैपालो प्रायोजित प्रचारबाजीमा उत्रने अनि पुरस्कार पाए हर्षबढाइँ थोपर्ने, पाइएन भनेर रूवाबासी गर्ने  ! लेखकहरुलाई कति चाहिएको हो प्रचार ?
वैशाख १०, २०७९ राजकुमार बानियाँ
वर्ष २०७८ को साहित्यतर्फ ‘रिपोर्ट कार्ड’ बनाउन तम्सेको छु । हतारहतार प्रेस पसेका थुप्रै पुस्तक त्यतै कतै अड्केका छन् । तर, वैशाख १५ सम्म तिनले पुरस्कार गुठीहरूको दर्ता नम्बर पाइसक्नेछन् । तिनको रोजाइमा बजारभन्दा पनि पुरस्कार पर्छन् । तिनलाई बजारले वास्ता नगरे पनि पुरस्कारदाताले पत्याइरहेकै छन् । असल—कमसल पुस्तक हरेक वर्ष पुरस्कृत भएकै छन् ।
बजारले पत्याउने साहित्य र नपत्याउने गैरसाहित्य हुने होइन । पुरस्कारले पत्याएका राम्रा र नपत्याएका नराम्रा हुने पनि होइनन् । न त बहुसमीक्षित, बहुप्रशंसित वा बहुसंस्करणित पुस्तक नै उम्दा हुन् ।
उसो त साहित्यको वर्षसमीक्षा पनि कर्मकाण्ड भइसक्यो । वर्षभरि कसले के लेखे वा छापे ? तिनको के कति चर्चा भयो ? कसले के पुरस्कार पाए ? कसले कुन महोत्सव गरे ? कुनकुन साहित्यकार बोलाएर कुनकुन सेसन राखियो ? बेस्ट सेलर को–को भए ? कसले कति कमाए ? कति लेखक उदाए, कति अस्ताए ? त्यस्तो चर्चा गरिबस्नु पनि हदैसम्मको क्लिसे काम हो ।
साहित्यमा वर्षका उपलब्धि के हुन्, क्षति के हुन् ? वर्ष साहित्य समीक्षाको मेनुमा सायद यिनै कुरा पर्दा हुन् । तर, मेनुबाहिर छेउकुनाको यसो चियोचर्चो गर्नु पनि मनासिब हुन्छ । त्यसैले मेरो पुस्तक, पुरस्कार र महोत्सवको सूची दिएन भनेर कोही दुःखी नहुनुहोला ।
साँच्चै भन्ने हो भने नेपाली साहित्य थुप्रै विरोधाभासमा जकडिएको छ । एकातिर प्रकाशक बन्धुहरू निन्याउरो मुख लगाएर किताबको बिक्री छैन भनिरहेका छन् भने अर्कातिर साहित्य पोस्ट्डटकम हरेक महिना ‘बेस्टसेलर सूची’ निकालिरहेको छ । कति अमिल्दो कुरा ! बिक्री नभईकन कसरी बेस्टसेलर भयो होला ? बजारबाट साहित्य अलग नहोला । तर, बजारकै आधारमा साहित्यको मूल्यांकन हुन सक्दैन ।
गत वर्षको सबैभन्दा उल्लेखनीय साहित्यिक समाचार के हो भने उदय अधिकारी (चितवन) समेत अब पाठक रहेनन् । मैले नेपाली साहित्यमा मानेका पक्का पाठक उदय लेखकमा ‘बढुवा’ भए । उनले ६ जना साहित्यकारको अन्तर्वार्ता पुस्तक ‘प्रश्न’ बजारमा ल्याएका छन् । त्यसैले होला, मेरो म्यासेन्जर बक्समा उनको ‘हेलो सर ! हेलो सर !! गुड मर्निङ सर !’ को मात्रा बढिरहेको छ । हुन त पाठक नै लेखक हुने हो । तर, अब स्वयं उदयजी कति पाठक रहने हुन्, मलाई शंका छ । नेपाली साहित्यको चिन्ताजनक स्थिति नै पाठकभन्दा लेखक धेरै हुनु हो ।
म साहित्यहन्ता होइन, तर एक पाठक जरुर हुँ । सबैलाई राम्रो, राम्रो भन्न सक्ने उत्साह मसँग छैन । मलाई थाहा छ, लेख्न सजिलो छैन । हाम्रा लेखकहरू उत्साही छन् । मिहिनेती छन् । उनीहरूको प्रयास राम्रो छ । तर, यति प्रयासले साहित्यलाई पुग्दैन । वाह, बधाई या क्याबात् भन्न मिल्ने रचना साह्रै थोरै छन् ।
नेपालमा राजनीतिक क्षेत्र जति कुरूप छ, साहित्य त्योभन्दा कम्ता छैन । नेतृत्वले राजनीतिको नाममा जतिसुकै डकैती गरोस्, थपडी बजाउने कार्यकर्ता हुन्छन् नै । साहित्यमा पनि पकेटका (पपेट) पाठक छन् । कथित फ्यानहरू आफ्नो लेखकले जे लेखे पनि त्यसको भजन—कीर्तन गर्छन्, आरती उतार्छन् । तिनलाई कृतिसँग मतलबै छैन, सिर्फ व्यक्ति हेर्छन् । छुस्स आलोचना भइहाल्यो भने भिड्न आइलाग्छन् । ती साहित्यका होइनन्, व्यक्तिविशेषका ‘बडिगार्ड’ हुन् । जनता निश्चित पार्टीका मतदाता हुँदा देशलाई घाटा छ भने पाठक निश्चित लेखकको मात्र हुँदा साहित्यलाई पनि मर्का पर्छ ।
वास्तवमा हामीकहाँ मञ्च, प्रशंसा र पुरस्कारलाई लेखकले धान्न सक्ने स्थिति छैन । प्रशंसकलाई लेखकको पहिलो किताबजस्तै किताब चाहिएको छ, प्रकाशकलाई पहिलेको जस्तै चल्ने किताब चाहिएको छ, लेखक बबुरोले यति धेरै दबाब कसरी धानोस् ? उसले सुगम बाटो तय गर्छ, आफ्नै किताबको नक्कल । त्यसपछि नक्कल बमोजिमको नक्कलको सिलसिला चलिरहन्छ । तिनले कति अब्बल, श्रेष्ठ र उत्कृष्ट लेखे कुरा जान्न केही पुरस्कार प्राप्त कृति पढ्यो भने थाहा भइहाल्छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरू जसरी प्रायोजित प्रचारबाजीमा रमाउँछन्, लेखक—साहित्यकारहरू पनि त्यही समाजको उपज हुन्, उनीहरूले फर्जी प्रशंसा नरुचाउने कुरै भएन । पालैपालो प्रायोजित प्रचारबाजीमा उत्रने अनि पुरस्कार पाए हर्षबढाइँ थोपर्ने, पाइएन भनेर रुवाबासी गर्ने ! लेखकहरूलाई कति प्रचार चाहिएको हो ? म आफैं छक्क पर्छु । प्रचारबाजी ‘कभर’ बाटै सुरु हुन्छ । बोक्राबाजीको दुनियाँमा गुदीतिर पस्ने कष्ट कसले गरोस् ? खल्तीका अनलाइनमा इमानदार समीक्षा आउने सम्भावना हाललाई देखिँदैन ।
यहाँ कनीकनी एउटा किताब लेखेको नवोदित साहित्यकारले पनि ठूलै पुरस्कार ताकेको हुन्छ । आजको दिनमा पुरस्कार पाउनु नै ठूलो वा राम्रो लेखक हुने प्रमाणचिह्न होइन । पुरस्कार पाउँदा लेखकीय परिचयको फैलावट बढ्न सक्छ । तर, पुरस्कार नितान्त प्राविधिक कुरा हो । त्यसका दाता, निर्णायक सबै मानिस हुन् । मानिसलाई कमजोरीसहित बुझ्नुपर्छ । मानिसले नजिक नै देख्ने हो । टाढाको कुरा अनुमान मात्र हुन्छ ।
लेखकलाई सबैभन्दा भूलभुलैयामा राख्ने माध्यम भएको छ, सामाजिक सञ्जाल । खासमा यी सञ्जाल नामका जञ्जालको कामै हल्लाका चल्ला कोरल्नु हो । लेखकहरू भर्चुअल लाइक, कमेन्ट, रिट्विट, बधाई तथा शुभकामना गन्ने, सुनियोजित रूपमा कसैले आफ्नो किताब च्यापेको फोटो खिचेर टाँस्ने अनि आफू यति लोकप्रिय भएको भ्रम दिने गरिरहेका छन् । त्यसका आधारमा को राम्रो, को नराम्रो छुट्याउन सकिँदैन । उनीहरू यस्ता भ्रामक आकांक्षाबाहिर जान सकेका छैनन् । साहित्य भनेको साहित्य मात्र हो, सनसनी होइन ।
अखबारका लेखोट पढेर जति आनन्द आउँछ, त्यही जति वा त्योभन्दा दोब्बर आनन्द आउँदैन भने त्यो बिलकुल साहित्य होइन । प्रायःजसो लेखोट दोहोर्‍याएर पढिँदैन, दोहोर्‍याएर नपढिने वा पढ्न नसकिने पनि साहित्य होइनन् । यहाँ त एकफेर पनि मेसैसित पढ्न नसकिने साहित्य हुन सक्दैन । मलाई लाग्छ, यहाँ सेलेब्रिटी भनिएका वा महोत्सवहरूमा यसरी लेख्नुपर्छ, त्यसरी लेख्नुपर्छ भन्ने साहित्यकारहरू नै दोहोर्‍याएर पढ्ने खालको लेख्दैनन् ।
गत वर्ष पनि साहित्यले बाजी मारेको भनेको अनुवादमा नै हो । मोहन मैनालीकृत ‘आकाशमुखी’ लाई झोलामै बोकेर हिँडिरहेको छु । निबन्ध वा गैरआख्यानमा रुचि राख्नेले पढे हुने किताब होइन कृति पाएर म गद्गद् छु । ११ जना विदेशी लेखकका उम्दा रचनाले ११ वटै किताब पढे बराबरको ताकत दिनेछन् । विदेशी लेखक मात्र किन ? नेपाली मूलकी लेखिका मञ्जुश्री थापाको उपन्यास ‘अल अफ अस इन आवर वोन लाइभ्स’ को अनुवाद उज्ज्वल प्रसाईकृत ‘एक्लै एक्लै’ को अवतारमा पठनीय ल्याएका छन् ।
अंग्रेजी साहित्यमा पहुँच नहुनेका लागि सुरेश बडालले पाउलो कोएलोको आत्मकथात्मक उपन्यास ‘हिप्पी’ को अनुवाद गरेका छन् । गैरआख्यानमा विनोदविक्रम केसी र नरेश ज्ञवालीले अरुन्धती रोयको ‘ती विद्रोही ती महात्मा’, वसन्त थापाले टोनी हागनको ‘बिल्डिङ ब्रिजेज टु थर्ड वर्ल्ड’ लाई ‘नेपालमा मेरो खोजयात्रा’, योङ्गे मिङ्ग्युर रिम्पोछेको सेल्फहेल्प विधाको पुस्तक ‘जोय अफ लिभिङ’ लाई डा. सरोज धितालले ‘जिउनुको मज्जा’ उल्था गरेर नेपाली पाठकलाई सुन्दर खजाना पस्केका छन् । तिनलाई साहित्य जगत्ले धेरथोर स्वागत गरेकै छ । यस हिसाबले हाम्रा अनुवादकले साहित्यको धर्म छाडेका छैनन् ।
नियात्रा अहिलेको साहित्यमा सबभन्दा फस्टाएको फसल हो । अनौपचारिक तथ्यांकमा गएको वर्ष धेरै नियात्रा विधाका पुस्तक छापिएका छन् । साहित्यकै सबभन्दा रोमाञ्चक विधा भएकाले यसमा नयाँ—पुराना लेखकको घुइँचो हुनु स्वाभाविक छ । यात्रा साहित्यमा धेरै लेखक हुनु उत्साहकै कुरा हो । तर, यो विधाका लेखकहरूले तारानाथ शर्मा, जनकलाल शर्मा, देवीचन्द्र श्रेष्ठ आदि साहित्यकारले थपना गरेको वरपीपल चौतारीमा सुस्ताउनेबाहेक लेखक स्वयंले बिसौनी या ‘सिग्नेचर’ निर्माण गरे भनेर देखाउने आधार कमै छन् ।
धेरैजसो नियात्रामा पर्यटकभन्दा पनि ‘भिजिटर’ का रूपमा एकपटक त्यस ठाउँमा पुगेको छ, खालि स्पोन्सर वा साथीभाइ, नातागोता, इष्टमित्रको मात्र कन्सिरी तात्ने गरी बखान गरेको छ, टुरिस्ट गाइडले जसरी बाटो र ठाउँ भट्ट्याएको छ, तर लेखकीय उद्दाम अनुभूति विरलै छन् । साहित्य लेखनमा सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ, निजात्मक अनुभूति । मौलिक वा विशिष्ट अनुभूतिबिनाका लेखनले पाठकलाई बाँधेर राख्न सक्दैन । अर्थात् पाठकले लेखकको जुत्ता लगाएर हिँड्नै पाउँदैन ।
समाजले मानेका लेखक वा साहित्यकारलाई तिमीले पढेकै छैनौ भन्नु अपमान हुन जान्छ । तर, के हाम्रा नियात्रा लेखकले अरूले यिनै विषयमा लेखेका पुस्तक पढेका छन् ? शंशय नै लाग्छ । कम्तीमा लेख्नेले स्वदेश वा विदेशमा घुम्ने ठाउँ के–के छन्, र ती कहाँ पर्छन् भन्ने कुरा युट्युबमा भिडियो नै छन् भन्ने हेक्का राखे हुने । यो बाँच्ने विधा बाँझोचाहिँ छैन । गत वर्ष केही पुस्तक दृष्टान्तका रूपमा आएका छन् । तिनलाई पढाकुहरूले पक्कै खोजीमेली गर्नेछन् ।
कविता त नेपाली साहित्यको नियमित र उर्वर फसल भइहाल्यो । तर, कवितालाई नपढिने विधाका रूपमा खुम्चिएको भन्नु अतिशयोक्ति होइन । छन्दबाहेकका कविता लघुकथा, निबन्ध, चुट्किला वा समाचार के हुन्, छुट्याउन मुस्किल परिरहेको छ । कविता कति विवश भरिया भएको छ भने आजका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मुद्दा उसकै थाप्लोमा छ । मुद्दाको तारेख बोकेर कविता आलसतालस देखिएको छ । कविताले कहिलेसम्म झन्डा बोक्ने ? कतिका एजेन्डा बोक्ने ? विधागत रूपमा कविता वाद होइन, बोधको नजिक हो । तर, वादको बन्धनमा रुमल्लिएका कविहरू राजनीतिक दलका ‘होल टाइमर’ नेता हुन् कि एनजीओका बेतलबी कार्यकर्ता हुन् ? यसै भन्न सकिँदैन । भावुकता या संवेदनाबिनाका कविताको पवित्रतामा जहिल्यै सन्देह हुन्छ । थोत्रा सूत्र र तुकबन्दी वा शब्दको बासी गठबन्धनले नयाँ कविता बन्दैन । विम्बको ठाउँमा नारा राखेर चल्दैन । जसले जेसुकै भनोस्, कविता भन्नु भावुकता वा संवेदनाकै उपज हो ।
वैश्विक चेतना आफ्नो ठाउँमा होला । तर, कविमा ‘कमन सेन्स’ चाहिएला, तर ‘पोलिटिक्कली करेक्ट’ हुने बाध्यता छैन । आजको साहित्यमा राजनीति जबर्जस्त छ । राजनीति ठाडै डकैती भइसक्दा पनि एकथरी कवि कवितामै राजनीति गर्छु भन्न पछि पर्दैनन् । कोरा भाषण, समाचार वा अलि चर्को गाली बेइज्जतीलाई नै सशक्त वा बेजोड कविता मान्ने हामी कुण्ठित हौं, कवि होइनौं । कविताद्वेषी हौं, काव्यप्रेमी होइनौं । राम्रा कविलाई अघि नलगाउने हो भने कविता विधाको स्तत्त्व बिलाउँदै जान सक्छ ।
साहित्यमा सबैभन्दा बदनामी र कुख्याति कमाएको विधा आत्मकथा हो । ‘कन्फेसन’ को ‘क’ पनि नभएको पुस्तकलाई कसरी आत्मकथा मान्ने ? यो आत्मा नै गुमाएको साहित्य बनेको छ । अनौपचारिक इतिहास मान्न सकिने यो विधाको सेना, प्रहरी, निजामतीका हाकिम, व्यापारी, लेखक, पत्रकारले हुर्मत लिइसकेका छन् ।
अहिले कसैको आत्मकथा पनि चल्तीमा छैन । आत्मकथाका उम्मेदवार पनि खासै देखिँदैनन् । वर्षान्तमा आएको सत्यमोहन जोशीको आत्मकथा ‘सत्यमोहन’ ले के कति चमत्कार गर्छ, त्यो भविष्यमै थाहा होला ।
लेखकहरूले औधी रुचाएको विधा हो आख्यान । बजारको बाछिटाजस्तो ‘एक बार ट्राई मारिहालौं’ भन्ने शैलीमा आख्यान प्रवेश चलेको चल्यै छ । वर्ष २०७८ मा आञ्चलिक स्वादको औपन्यासिक उपस्थिति अब्बल देखिँदै छ । तिनले लोक जीवन, लोक परिवेश, लोक लवज अनि लोक शब्दावलीलाई निकै महत्त्व दिएका छन् । यसले नेपाली शब्दभण्डार पनि चुलिएको छ । केही शैक्षिक उपन्यासहरू पनि पठनीय रूपमा आएका छन् । प्रवासबाट पनि कतिपय उपन्यास वैश्विक आवाज बोकेर उदाएका छन् । आख्यानकारहरूको मनसुवा नराम्रो होइन, तर ठ्याक्कै राम्रो हुन बाँकी नै छ ।
गत वर्ष कथामा पनि छिटपुट सम्भावना देखिएका छन् । सबै संग्रहका सबै कथा राम्रा नभए पनि कतिपयले कथामा जेथा थप्ने काम गरेका छन् । विधागत जानकारी नपाएका वा अग्रजका कथा नपढेकाले कतिपय चर्को अन्तरद्वन्द्वमा फसेका देखिन्छन् । घटनाको मुचुल्का उठाउने वा मुचुल्कालाई नै कथा बनाउने उद्यममा अधिकांश कथाकारहरू देखिन्छन् । त्यस्तो धङधङीबाट उन्मुक्त भएको राम्रो ।
साहित्यमा सुखद कुरा अरू पनि छन् । यो वर्ष महाकाव्यहरूले आफ्नो उपस्थिति देखाएका छन् । लगभग भूतपूर्व विधा भइसकेको महाकाव्य बलियोसँग आउनु भनेको साहित्यका निम्ति शुभ संकेत पनि हो । यो विधा बजार, अर्मपर्म वा प्रोपगान्डाका लागि आएको भन्दा पनि दीर्घ साधना अनि साहित्यप्रतिको आस्थाको प्रतिफल हो । अहिले कथित मूलधारमा गीत, गजल, हाइकु आदि विधाको खासै चर्चा परिचर्चा हुँदैन । संख्यात्मकको साटो गुणात्मक स्तरमा आउने चुनौती भए पनि ढिलो—चाँडो ती विधालाई न्याय हुने नै छ ।
इतिहास, संस्कृति, कलाका किताब लगभग दुर्लभ छन् । तर, तिनको पाठक छैनन् भन्ने होइन । लेखक एकदमै थोरै भएकाले उनीहरूलाई परिचयको संकट छैन । साहित्यमा सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा साहित्य–समालोचना र सिद्धान्तका पुस्तक हम्मेसि देखिँदैनन् । विश्वविद्यालयका अध्यापकहरूले यदाकदा विभिन्न परियोजना अन्तर्गत लेखे पनि स्वतन्त्र अध्येताको सर्वथा अभाव छ । नाटक विधा त साहित्यमा लगभग गयल नै भइसक्यो । राम्रो जीवनी पनि गत वर्ष देखिएनन् ।
गत वर्ष पालिकास्तरीय साहित्य महोत्सव असार नलाग्दै भए । सायद स्थानीय तहमा नेतृत्व नफेरिँदै बजेटको जोहो गर्ने मनोविज्ञानले होला । महोत्सवमा महिला प्रतिनिधित्वले टाउको दुखाउन थालेपछि अब त सामाजिक सञ्जालमा अग्रिम प्रचारप्रसार पनि हुन छाड्यो । पालिकापिच्छे महोत्सव हुनु ठीकै हो । तर, जुन ठाउँको महोत्सवमा पनि काठमाडौंका एक हूल लगेर तिनैका बीचमा पाण्डित्याइँ छाँट्नु पनि कम विस्मयकारी होइन । पाठकहरूलाई के नलागोस् भने यो गत वर्षको कुरा मात्र हो । यहाँ हरेक वर्ष दोहोरिने कुरा यिनै हुन् । फेरि पनि साहित्य लेख्ने साहित्यकारले हो । किताब छाप्ने प्रकाशकले नै हो । पढ्ने काम पाठककै हो । पाठक वा समीक्षक महोदय ! नेपाली साहित्यबारे स्वस्थ बहसमा उत्रौं । साहित्यकारको पनि शुभ–चिन्ता गरौं, तर साहित्यको बेवास्ता नगरौं ।
प्रकाशित : वैशाख १०, २०७९ ०९:२४
वासु शशीको खुला प्रेमपत्र
मृत्युलाई रोमान्स ठान्ने वासु शशी जीवित रहेका भए अहिले ८५ वर्षका हुन्थे । जीवनसङ्गिनी जुलुम वैद्यलाई वासु भरे आउँछन्, भोलि आउँछन्जस्तो लागिरहन्छ । भनिरहेकी छन्, ‘मलाई त उहाँ नभएकोजस्तो लाग्दैन । कतै घुम्न गएजस्तो लाग्छ ।’ जुलुम कोठा सजाउन छाड्दिनन्, खानाको भाग नछुट्याउन मनै मान्दैन । प्रतीक्षामा संघार कुरिरहन्छिन्, बत्तीमा तेल थप्न छोड्दिनन् ।
चैत्र १२, २०७८ राजकुमार बानियाँ
त्यसै भनिएको होइन, वासु शशीले कविता मात्र लेखेनन्, कवितै बाँचे । र, त हाकाहाकी भन्न सके– ‘मसँग मसी भएन भने रगतले कविता लेख्छु ।’
मसी नभए रगतले कविता लेख्ने दुस्साहस कसको हुन्छ ? सिर्फ वासु शशीजस्ता असाधारण कविको । जसलाई कलमको मसी सकिए पनि पर्वाह छैन, रगतले पनि कविता लेख्न सक्छन् ।
समालोचक कुमारबहादुर जोशीका शब्द सापटी लिने हो भने कविता बाँच्ने मानिसहरू महाकवि देवकोटाजस्ता हुन्छन्, अथवा कवि भूपी वा शशी वा हरिभक्त, कालीप्रसादजस्ता हुन्छन् । उनीहरू जस्तो कविता लेख्छन्, त्यस्तै जीवन बाँच्छन् ।
साँच्चै वासु शशीको जीवन आफ्नै कविताजस्तो थियो । कविता रच्ने मात्र नभएर कविता बाँच्ने कवि । शशी स्वयम् कविता हुन् । सहृदयी, निश्छल, भावुक, संवेदनशील, तर अस्तव्यस्त र अव्यावहारिक पर्सोना ।
कविता र वासु शशीबीच कुनै दूरी रहेन । उनले जीवन बुझ्ने सुन्दरतम साधन कवितालाई नै बनाए । जीवनका सुखानुभूति र दुःखानुभूति कवितामै पोखे । उनका कविताका हरेक हरफमा मानिसका सूक्ष्म संवेदना चलमलाइरहेका देखिन्छन् ।
सम्पूर्ण कवि हुन् शशी । भित्र पनि कवि, बाहिर पनि कवि । देखिने पनि कवि, नदेखिने पनि कवि । असल कविमा असल गुण भेटिन्न भन्छन् । तर, उनका कविताले जीवनका शाश्वत मूल्य र मान्यताको खोजी गरेका छन् । सुकुमार विचार र तीव्र सौन्दर्यमार्फत उनले काव्यको चुली भेट्टाएका छन् ।
साहित्यकार दौलतविक्रम विष्ट शशीलाई ‘लर्ड वाइरन’ भन्दा रहेछन् । किनभने कविताको रोमान्टिक स्वर उनमा अटेसमटेस छ । उनका नवीनतम वैयक्तिक विम्बहरूले कवितामा मिठास, माधुर्य र लालित्य भरेका छन् ।
शशीका लागि मानिस नै सबथोक हो । सृष्टिको आश्चर्यलाग्दो कुनै कुरा छ भने त्यो पनि मानिस नै हो । मानिसलाई मानिस नभई हुन्न । मानिसलाई मानिसको माया नभई हुन्न । मानिसले पुज्ने मानिसै हो । भगवान् भनेको पनि मानिस नै हो ।
मानिसको खराब पक्षबाट पनि यी कवि आहत छन् । उनी काव्यिक कामना गर्छन्– मानिसले मानिसलाई नबिगारे पनि हुन्थ्यो । मानिसले मानिसलाई दिएको कष्ट सबभन्दा बढी कष्टकर हुन्छ । जीवन सुन्दर छ, घृणित नबनाए पनि हुन्थ्यो । ईश्वर पनि मानिसै भइदिए उसलाई साथी बनाउने उनको उद्घोष छ ।
‘ईश्वर छ, छैन भन्ने थाहा पाएर हामीलाई के हुन्छ ? विश्वास र अविश्वासको कुनै प्रश्न छैन । म ईश्वरबिना पनि बाँच्न सक्छु,’ उनी भन्छन्, ‘यदि ईश्वर छ भने त्यो जरुर मानिसले बनाएको हो ।’
इतिहास पल्टाउँदा २००७ सालको क्रान्तिपछि मानवीयतालाई महत्त्व दिएर लेख्ने अठोट गरे नेपाली कविहरूले । वासु शशीजस्ता कविले यस महाभियानलाई नसकार्ने कुरै भएन । अर्नेस्ट हेमिङ्वेको जस्तो भाषा, वाल्ट ह्विटम्यानको जस्तो चेतना, रवीन्द्रनाथ ठाकुरको जस्तो अध्यात्मको त्रिवेणीमा शशी सिर्जनाको संसारमा पसे ।
वासु शशीका कविताको डीएनएमा बिछट्टको मानवतावाद छ । आफ्नो युगको अग्रदूतका रूपमा कवितामार्फत उनले शान्ति, सौन्दर्य, प्रीति, सद्भाव एवं लोकमंगलका अमर सन्देश दिएका छन् ।
हुन त बुद्ध, मार्क्स, गान्धीसम्मले मानवताकै पक्ष लिए । त्यसको काव्यिक प्रयोग भने बीसौँ शताब्दीमा शशीजस्ता कविहरूले गरे । विचार भन्दैमा उनले कसैको कुम्लो बोकेनन्, आफ्नै मौलिक विचारलाई कविताको पहिरन दिए ।
हुन पनि बीसौँ शताब्दीको अनुभव सुखद रहेन । ठूलठूला युद्ध, क्रान्ति, परिवर्तन र उथलपुथल भए । त्यही समयको छाया छ शशीका कवितामा । त्यहाँदेखि नानो टेक्नोलोजी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आदिको समयसम्म पनि अतिवाद, आतङ्कवाद, शक्तिपूजन, धार्मिक कट्टरपन्थ, अन्ध राष्ट्रवाद, भ्रष्ट राजनीतिक पद्धतिको जगजगी रहेकाले शशीका कविता अझ सान्दर्भिक भएका छन् ।
शशीको काव्यिक उद्देश्य प्रत्येक मानिसको गरिमाको स्थापना गर्नु हो । त्यसैले उनका कविता हदैसम्म मानवीय, करुणामय, प्रेममय र शालीन छन् । आवेग, स्वार्थ, लोभ र हिंसाका एकलकाँटे विचारलाई उनी अस्वीकार गर्छन् । मानवीय गुण, पद्धति र संस्कारको आकाङ्क्षा राख्छन् । पूर्ण, स्वस्थ र सिर्जनशील मानिस उनको आदर्श हो ।
मानवतावादको दार्शनिक धरातल विशाल छ । धर्म, राष्ट्र, सिद्धान्त, जातभन्दा माथि उठेर गरिने व्यवहार नै मानवतावाद हो । शान्ति, एकता र सहयोगात्मक भावना यसका मूलमन्त्र हुन् । मानवतावादले मानवजातिको एकतामा मात्र जोड दिँदैन, मानिसलाई अझ संवेदनशील, कल्पनाशील र सिर्जनशील बनाउँछ ।
कताकता शशीका कविताले मानवतावादको बढाइचढाइ गरेजस्तो लाग्न सक्छ । तर, मानव जातिको भविष्यप्रति चिन्ता जनाउँदै आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नु कविको धर्म हो । कुनै पनि मानवतावादीले अन्यायपूर्ण युद्धको स्वागत गर्नै सक्दैन । उसले आशाको दियालो बालेर भोलिको सुन्दर संसारको परिकल्पना गर्छ नै ।
शशीका गद्यशैलीका कविता कुनै अत्यन्त लघुकायाका छन् भने कुनै खण्डकाव्य स्तरका । छिमेकी भारत र चीनबीचको युद्धको पृष्ठभूमिमा लेखिएको कविता ‘बीसौँ शताब्दीको गीत’ लामो काव्यको उदाहरण हो ।
वासु शशी आणविक शस्त्रास्त्र र ध्वंसको तीव्र भर्त्सना गर्छन् भने सङ्कीर्ण राष्ट्रवादलाई धिक्कार्छन् । किसान र मजदुरलाई मानवीय सभ्यता र संस्कृतिको सक्कली स्रष्टा मान्छन् । उनका लागि देश पहिरोमा भत्कँदैन, खोलानालामा सुक्दैन, हिउँमा कक्रिँदैन, देश बगरमा किल्चिलाउँदैन, मानिसको दिलमा भत्किन्छ, मानिसको आँतमा सुक्छ, मानिसको जीउमा कक्रिन्छ, देश मानिसको मस्तिष्कमा किल्चिलाउँछ । मानिसको मनमा मच्चिएको भूकम्पमा भताभुङ्ग हुन्छ । अनि त कवि लेख्छन्, ‘देश अर्थात् देश खोइ ?’
कवि के भन्छन् भने यो देशमा दुइटा हिमालय छन्, एउटा हिउँको, अर्को मानवीय दुःख र दरिद्रताको । उनी व्यथित भएर भन्छन्, ‘दुःख पनि बिक्दो हो त म बडो सुख पाउँथेँ ।’ उनको प्रश्न छ, ‘देश नागरिकको हो कि एउटा बजार मात्रै हो ? वा पसलहरूको समूह मात्रै हो ?’ उनका लागि मानिसहरू चिरागभन्दा उज्याला हुन्, मानिसहरू प्रेमभन्दा महान् हुन्, मानिसहरू सत्यभन्दा महान् हुन् ।
शशी के पनि भन्छन् भने मानिस सबभन्दा बढी मानिसकहाँ जान चाहन्छ, मानिसले मानिसलाई मन पराउनुजस्तो सुन्दर अरु केही छैन । मानिस र मानिसको सम्बन्धजस्तो मधुर अरू केही हुन पनि सक्दैन । खतरनाक तब हुन्छ, जब मानिसलाई मानिस होइन, मालसामान भए पुग्छ ।
कविको दृष्टिमा मानवीय संवेदनालाई बचाउने सर्वोत्तम माध्यम साहित्य, कला र सङ्गीत नै हुन् । यिनले मानिसको मन र मस्तिष्कलाई परिमार्जित र सुसंस्कृत तुल्याइदिन्छन् । उनी जहिल्यै सरलताको पक्षपाती देखिए । शशीको दृष्टिमा सरलता नै सुन्दरता हो । तर, दुर्बोध्यता विशिष्टता र अपराध दुवै होइन ।
स्पष्टता स्वयम्मा सौन्दर्य र आकर्षण हो । त्यो शशीका कवितामा छ । साहित्य जति मात्रामा क्लिष्ट हुन्छ, त्यति नै मात्रामा त्यो साहित्यकारको असफलता हुन जान्छ । कवितालाई बोधगम्य तुल्याउन कविले चानेचुने परिश्रम गरेर पुग्दैन । जसरी आगोले मूर्खलाई पनि पोल्छ, विद्वान्लाई पनि पोल्छ, त्यसरी नै साँचो साहित्य सबैका लागि हुन्छ ।
मानिसलाई अचाक्ली माया गर्ने शशी प्रेमिल कवि हुन् । उनका कवितामा प्रेम रसात्मक अभिव्यक्ति छ । मानिसका लागि खुला प्रेमपत्रजस्तै छन् शशीका कविताहरू । उनी भन्छन्– प्रेम नहुनुजस्तो कुरूपता केही हुन सक्दैन । आमाको मृत्युपछिको एक्लोपनले वासुदेव वैद्यलाई वासु शशी बनायो । र, ‘पानी गल्दैन’ जस्तो सुन्दर काव्य लेखे । छोरा नीरज अमेरिका गएको प्रसंगमा लेखे, ‘घर छाडेर जानेले घरै लिएर गएछ, कोठा, चोटा, छतहरू बाँकी छाडेर घरचाहिँ लिएर गएछ ।’
खासमा समयको प्रतिध्वनि छ शशीका कवितामा । नागर जीवनका अनिश्चितता, कोलाहल, त्रासदी, हाहाकार, दौडधुप, बेफुर्सदी, रक्तपातको मार्मिक अभिव्यक्ति छन् । व्यक्तिजीवनका झिझ्याट, हैरानी, असन्तोष र उदासीनताको तीतो र खल्लो अनुभव पनि छ । सामाजिक जीवनमा आएका उल्टोसुल्टो र घातप्रतिघातलाई सोहोरेर उनले कविता लेखेका छन् ।
कतिपयलाई लाग्न सक्छ, वासु शशी लहडी र मनमौजी कवि हुन् । तर, उनी विचारका कवि हुन् । शैली मात्र समात्ने लेखकहरूलाई उनी असफल ठान्छन् । विचार नसमातेका कविता बाँच्दैनन् भन्ने लाग्छ । उनी लेख्नु पहिल्यै ‘थिम’ थाहा नपाउने लेखक हुन् । थाहा पाउनु नै पुरानो हुनु हो उनका लागि । उनी थाहा नपाइसकेका कुरा लेख्छन् । जब लेख्छन्, तब बुझ्छन् । बुझिसकेर लेख्दैनन् ।
प्रत्येक कविको आफ्नै शैली हुन्छ, त्यही शैलीबाटै लेखक अरूका सामु अभिव्यक्त हुन्छ । वासु शशी शाब्दिक जञ्जाल र भाषिक कृत्रिमतामा कहिल्यै फसेनन् । जीवनलाई अलग राखेर सिर्जना गरेनन् पनि । जीवनकै छेउछाउ हिँडिरहे डरलाग्दोसँग ।
हिजोआजका कविहरू कविताका नाममा कुण्ठा लेख्छन् । वासु शशीचाहिँ कुण्ठाको उदात्तीकरण गर्छन् । आत्मपीडा, प्रणयभाव, प्रकृतिप्रेमका भावधाराले उनी निथ्रुक्कै छन् । यस्तो लाग्छ, रूखका साथी चरा हुन्, चराका साथी रूख हुन् । चरा र रूख दुवैका साथी वासु शशी ।
लाग्छ, बहुविधामा रमाएका शशी बाँच्नभन्दा लेख्न मन पराउने कवि छन् । यी विश्वप्रेमी हरेक क्षण बालक भइरहन चाहन्छन् । शशीको शक्ति के पनि हो भने समकालीन सबै मित्रलाई आफ्नै टेबलमा ल्याए । पर्खालबिना पनि सबैसँग रहने जीवन दर्शन थियो उनमा । पर्खाल लगाएपछि धेरै थोक बाहिर पर्छ भन्ने चेतना त्यसकै भावपूर्ण दृष्टान्त हो । उनका सम्पादक दाजु गोविन्द वैद्यले भनिरहे, ‘पहिले म कवि थिएँ, कविता लेखेँ पनि । मैले छाडेँ, वासुले समातिरह्यो । ऊ ठूलो कवि बन्यो, म सानो पत्रकार बनेँ ।’
वासु शशी कुनै पद वा पुरस्कारका कारण कवि भएका होइनन् । आफ्नो ५७ वर्षे जीवनमा उनले ती चिजको सामान्य स्पर्शसमेत पाएनन् । पुरस्कारले साहित्यकारलाई भिखारी र पुरस्कार गुठीका पदाधिकारीलाई व्यापारी बनाएको उनलाई बोध थियो ।
प्रजातन्त्रको पुनरागमनपछि बनेको नयाँ प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा उनीजस्ता असली प्राज्ञ अटाएनन् । रेडियो नेपालमा सल्लाहकार बन्ने हल्ला मात्रै सुनियो । राष्ट्रिय सभाको सांसद बन्न सिमलावासी जगदीशशमशेर नै चाहियो ।
मृत्युलाई रोमान्स ठान्ने वासु शशी जीवित रहेका भए अहिले ८५ वर्षका हुन्थे । उनको प्रस्थान अपर्झट भयो, कुनै सङ्केत नै नगरी । त्यसैले त उनकी जीवनसङ्गीनी जुलुम वैद्यलाई यतिका वर्षसम्म पनि वासु शशी नभएजस्तो लाग्दैन । भरे आउँछन्, भोलि आउँछन् जस्तो लागिरहन्छ । उनी भनिरहेकी छन्, ‘मलाई त उहाँ नभएकोजस्तो लाग्दैन । कतै घुम्न गएजस्तो लाग्छ ।’
काव्यमा वासु शशीको मृत्यु स्वीकार्य छँदै छैन । उनका कविताले शशीको आभास दिलाउँछन् नै । त्यसैले जुलुम कोठा सजाउन छाड्दिनन्, खानाको भाग नछुट्याउन मनै मान्दैन । प्रतीक्षामा संघार कुरिरहन्छिन्, बत्तीमा तेल थप्न छोड्दिनन् ।
उनी मात्र किन ? साहित्यकार परशु प्रधानका औँला अझै पनि टेलिफोन नं ४७१७६० मा अनायास जान्छन् । शशीको पुरानो घरमा लोकल रक्सी र मासुचिउरा खाएको क्षण आलै छन् । आखिर वासु शशी भनेको ढुङ्गाभन्दा बूढो पनि होइन । हावाजस्तो पनि हलुका होइन ।
तर, समयको खेल, ज्ञानु भण्डारीले भने/सुनाए– बासे त कार्गो भएर आयो ! क्यान्सरले आखिर जहाजको बाकसभित्र पार्सल बनाएर पठायो उनलाई । लाग्छ, यी यशस्वी कविले महाप्रस्थान गरेकै छैनन् । उनी त आफ्ना रचनाहरूमै छेलिएका छन् । फेरि कतै न कतै देखिइहाल्छन् ।
प्रकाशित : चैत्र १२, २०७८ ०८:११
रूखले लेखेको पृथ्वीको इतिहास
सीमाहरू भत्काउँदै ‘रेत समाधि’
‘बरु विज्ञापन कलात्मक छन्’
मैले रोजेँ, रुन र तिमीलाई माया गर्न